Baardheere Waxaa Kajira Maamul hoos taga Ciidanka Itoobiya Sidaas Waxaa Yiri Mas'uul katirsan DF-ka
Si lama filaan ah mas'uul katirsan dowlada Federaalka oo dabadhilif u ahaa ciidamada Xabashida Itoobiya ee Soomaaliya kusoo duulay ayaa ka shanqariyay in Itoobiya ay si toos ah umaamusho magaalooyin katirsan gobolka Gedo.
Guddoomiyaha degmada Baardheere ayaa warbaahinta u sheegay in saraakiisha ciidanka Itoobiya ay maamul iyaga ugaar ah udhiseen magaalada islamarkaana ay diideen in uu shaqeeyo maamulkii taabacsanaa DF-ka.
"Waxaan amar kusoo saarnay in ay ciidamada Itoobiya isaga Baxaan Baardheere balse amarkeenu mashaqeynayo sababtoo ah iyagaa maamul usameystay magaalada oo ka taliya”ayuu yiri guddoomiyaha Baardheere.
Mas’uulkan ayaa carrabka ku adkeeyay in garoonka diyaaradaha macmalka Baardheere uu si toos ah uga shaqeeyo amarka Itoobiya islamarkaana ay diideen in diyaarado aan diyaaradahooda ahayn kasoo degaan.
"Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in ciidamada Itoobiya ee Baardheere ku sugan ay iyagu maamulkii la wareegeen oo ay sida ay rabaan ugu tasarufayaan” ayuu hadalkiisa sii raaciyay mas’uulkan katirsan DF-ka.
Wuxuu ugu baaqay ciidamada Itoobiya in ay isaga baxaan gobolka Gedo balse baaqaas ayaa ah mid aan warbaahinta dhaafin, hadalkan ayaa muujinaya sida Xabashidu ay ubahdileen kuwa dabadhilifyada u ah ee ku gacansiiyay qabsashada dhulalka muslimiinta.
Kumanaan katirsan ciidamada Itoobiya ayaa magaca AMISOM ku qabsaday magaalooyin iyo degmooyin katirsan gobollada dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya.
Warar Sheegaya in Ciidamada Itoobiya Ay isaga Baxeen Magalada Dhuusamareeb.